20th POETRY AFRICA UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINKONDLO EZIKOLENI - Centre for Creative Arts
I-Poetry Africa izimisele ekuqhakambiseni usiko nobuciko bokubhala nokuhaywa kwezinkondlo, ikakhulukazi kwintsha yakwaZulu-Natal. Umgubho umema abafundi kusukela emabangeni aphansi kuya kwaphakeme ukuba bathathe lelithuba eliyingqayizivele bathumele imisebenzi yabo kumncintiswano wezinkondlo owenzeka ngokuhlanganyela kanye nomgubho we-Poetry Africa. Izinkondlo kungaba ngezibhalwe ngolwimi lwesilungu noma ngolwesiZulu, asikho isihloko esibekiwe ukuba kubhalwe ngaphansi kwaso ngakho abafundi bavumelekile ukubhala nanoma ngasiphi isihloko abafuna ukubhala ngaso. Umfundi ngamunye kuvumeleke ukuba athumele izinkondlo ezimbili kuphela, - Azivumelekile izinkondlo ezingabhalekile ngendlela ecacile nefanele. (Niyacelwa ukuba nibhale izinombolo zamakhasi)
USUKU LOKUVALWA KOKULETHWA IZINKONDLO: 23 Ku-Mandulo 2016
Umgubho we-Poetry Africa eminyakeni engamashumi amabili, uzoqala mhla zingu-10-15 kuMfumfu 2016.
Abafundi abaphumelele kulomncintiswano bazofunda izinkondlo zabo kumgubho we-Poetry Africa mhla zingu-14 kuMfumfu 2016. Imikomelo izokwethulwa ngabakwa Adams booksellers Kanye ne-Centre For Creative Arts (UKZN).
• Imininingwane ephelele yesikole (I-imeyli,inombolo yocingo/ikheli)
Tel: 031 260 1868
Cell: 072 729 2191